कसरी यस्तो भयो !! कांग्रेसले जितेको वार्डमा एमालेको विजय र्‍याली ! – Complete Nepali News Portal
कसरी यस्तो भयो !! कांग्रेसले जितेको वार्डमा एमालेको विजय र्‍याली !
May 19, 2017	3,732 Views
सर्वाधिक चासो रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा वडाको मत गणना गर्दा समेत अनौठो संयोग परेको छ । वडाको मत गणनाको अन्तिम नतिजा आउने समयमा एउटा पार्टीले जितेको चर्चा चलेपछि चर्चाकै भरमा विजय जुलुस निकालिएको छ, तर जित भने अर्कै पार्टीको भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका १ मा एमाले उम्मेदवार गिता श्रेष्ठले जितेको अनौपचारिक जानकारी आएको थियो । त्यसकै आधारमा एमाले कार्यकर्ताहरुले बाजागाजा सहित विजय जुलुस निकाल्ने तयारी समेत गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले मत परिणाम घोषणा गर्ने समयमा कांग्रेसका जयराम श्रेष्ठ १४ मतले विजयी भएको घोषणा गर्‍यो । कांग्रेस उम्मेदवारले ११ सय ७७ मत पाए र एमाले उम्मेदवारले ११ सय ६३ मत ल्याए ।
बिहीबार भरतपुर ४ को मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने समयमा पनि त्यस्तै भयो । एमाले उम्मेदवार हरि आचार्यले कांग्रेस उम्मेदवार उपेन्द्रराज सापकोटालाई निर्वाचन जितेकोमा बधाई समेत दिए । निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्ने समयमा एमालेका हरि आचार्य विजयी भए ।
कांग्रेसको विरोधका कारण केही समय मत गणना समेत प्रभावित भएको थियो । आचार्य ७ मतले विजयी भए । आचार्यले १७ सय २० मत पाएका थिए भने सापकोटाले १७ सय १३ मत पाएका थिए । शुक्रबार पनि यस्तै घट्ना दोहोरीन पुग्यो । भरतपुर ७ मा कांग्रेसका श्याम लामिछाने विजयी भएको सुचना सामाजिक सञ्जालमा छाइसकेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले एमालेका राजेन्द्रमणि काफ्ले १४ मतले विजयी भएको घोषणा गर्‍यो ।
काफ्लेले १४ सय ९४ मत ल्याएका छन भने लामिछानेले १४ सय ८० मत पाएका छन् ।
५ जेष्ठ २०७४
चेलीको आवाज : ३ करोड नेपालीहरुको लागि, मोदी र मुकुन्देलाई कडा चेतावनी, रवि दाजु प्रति नमन (भिडियो सहित)